Amakati adlani uma emancane? | Amakati kaNoti
Amakati adlani uma emancane?
UMaria Jose Roldan | | Ukudla
AmaKati angamabhola amancane amahle ezinwele ofuna ukuwaphatha ezandleni zakho futhi uwafake ukutotosa okuningi, kodwa ngeshwa amaningi awo ngeke abe nekusasa elihle, ngoba angagcina esesitaladini noma endaweni yokukhosela. Ngakho-ke, lapho sihlangana noyedwa noma ngaphezulu bese sinquma ukubanakekela, kufanele sazi ukuthi yini okufanele bayidle.
Ngakho ake sithole ukuthi amakati adlani uma emancane.
1 Izinsuku ezingu-0 kuya emavikini angu-3-4
2 Kusuka kumaviki ama-4 kuye ezinyangeni ezimbili
3 Kusuka ezinyangeni ezimbili kuya onyakeni
4 Ungenzi lawa maphutha lapho wondla ikati lakho
4.1 Ukudla okuningi
4.2 Nikeza ukudla okomile kuphela uma sebenamazinyo
4.3 Nikeza amanzi amancane
4.4 Imifino noma imifino
4.5 Dala ukuntuleka kokudla okunempilo
Izinsuku ezingu-0 kuya emavikini angu-3-4
Amakati kusukela ekuzalweni kuye enyangeni nohhafu (ngaphezulu noma ngaphansi) kufanele bondliwe kuphela ngobisi lukanina, ngoba ngaphezu kokuba nazo zonke izakhamzimba abazidingayo, kuqinisa izivikelo zazo. Ngalesi sizathu, akufanele neze bahlukaniswe besebancane kunina, ngoba ukwenza njalo kungabeka engozini impilo ngisho nezimpilo zabancane.
Kepha uma umama engakwazi ukuyinakekela, noma kungenxa yokuthi kwenzeke okuthile okubucayi kuye, ngoba uyagula noma ngoba asimtholi ndawo, kuzofanele sibanikeze ubisi lwezinja esizokuthola ukudayiswa emitholampilo yezilwane nasezibhedlela kanye nasezitolo zezilwane. Siyayifudumeza (kufanele ibe cishe ku-37ºC) bese sibanikeza njalo emahoreni ama-3-4 (kepha qaphela: uma belala ngokuthula ebusuku, akufanele bavuswe). Endabeni yokungalutholi lolu hlobo lobisi, singalungisa lokhu okuzenzela:
I-1/4 yobisi lonke ngaphandle kwe-lactose
Isipuni esincane esingu-1 sikakhilimu osindayo
1 isikhuphasha seqanda (ngaphandle komhlophe)
Kusuka kumaviki ama-4 kuye ezinyangeni ezimbili
Lapho abancane sebezohlangana nenyanga yempilo sekuyisikhathi sokubanika okuthile okuqinile. Izikhathi ezimbalwa zokuqala, njengoba bengenawo amazinyo athuthukile okwamanje, kungakuhle ukuthi ubanikeze ukudla okumanzi kwekati: kuqoshiwe kahle, kuxutshwe nobisi ebesibanikeza lona kuze kube manje futhi sabanikeza. Uma bengafuni ukudla, sizofaka ucezu oluncane kakhulu emilonyeni yabo bese siyayivala., ngaphandle kokubalimaza kodwa ngokuqinile. Ngakho-ke ngokwemvelo bazogwinya.
Ngemuva kwalokho, siphinde sibanikeze ipuleti futhi, futhi kusukela lapho kufanele badle bodwaKepha uma bengakwenzi, besizobuyisela ucezu emilonyeni yabo.
Kubalulekile ukuqhubeka nokudla ngamabhodlela kuze kube amasonto ayisithupha kuya kwayisithupha; ukwenza isibonelo, banganikezwa amahlandla ama-6 ngebhodlela kanye nokunye ukudla okuthambile. Ngale ndlela, kuzoba lula ngabo ukujwayela.
Kusuka ezinyangeni ezimbili kuya onyakeni
Amantshontsho akule minyaka bangaqhubeka nokudla ukudla kwezikati ezimanzi, noma kungenjalo ngicabanga ukuthi yomile. Uma kwenzeka sifuna ukumupha ukudla okungokwemvelo okuningi, singamnika:
Izinhlanzi ezibilisiwe ngaphandle kwamathambo
Inkukhu ebilisiwe ebilisiwe, unogwaja, noma i-turkey
Inkukhu eqoshiwe, iwundlu noma inhliziyo yenkomo
Ukudla kwe-Yum kwamakati
Ungenzi lawa maphutha lapho wondla ikati lakho
Senza amaphutha amaningi ukuzondla thina. Sidla kakhulu ushukela nosawoti, sidla okuncane bese sidla kakhulu. Ngazo zonke izinkinga esinazo ngokudla kwethu, kuyamangaza yini ukuthi senza amaphutha lapho sondla amakati ethu?
Manje yimaphi amaphutha esiwenzayo futhi kungani? Amakati ethu awakwazi ukusitshela, hhayi ngamazwi. Kwesinye isikhathi asazi ukuthi siphaphalaze kuphi kuze kugule ikati lethu.
Kubalulekile ukwazi lawa maphutha ukugwema ukuwenza uma kuziwa ekondleni ikati lakho. Ungalahlekelwa imininingwane!
Mhlawumbe iphutha elejwayelekile elenziwa ngabantu lapho ukondla amakati ngokweqile. Ukukhuluphala yisifo esivame kakhulu sokudla okunempilo emakati. Yize izinyane lekati elikhuluphele lingabukeka lihle, ukukhuluphala ngokweqile kuhlotshaniswa nezinkinga zempilo yekati, njengesifo sikashukela, isifo samathambo nezifo zomgudu womchamo. Eqinisweni, amakati angahlushwa into efana naleso simo somuntu, isifo se-metabolic syndrome.
Kwesinye isikhathi akukhona ukuthi ubanikeza ukudla okwengeziwe, ukuthi uma bebancane bahamba kancane uma kuqhathaniswa namakati abantu asebekhulile asebenzayo. Lapho zincane izidingo zazo zokudla okunomsoco ziphansi kakhulu, ngakho-ke kulula ukuzinikeza ngokweqile.
Ngakho-ke ikati lakho lidinga ukudla okungakanani? Lowo ngumbuzo ophendulwa kangcono nguchwepheshe, noma kunjalo Izincomo zisukela kuma-calories angama-24 kuye kwangama-35 ngosuku ngephawundi ngalinye, ukugcina amakati ngesisindo esijwayelekile futhi esinempilo. Yize uma unokungabaza, khuluma nodokotela wakho wezilwane futhi akutshele inani eliqondile elibheka umzimba wekati lakho.
Nikeza ukudla okomile kuphela uma sebenamazinyo
Iphutha elikhulu elenziwa ngabantu ukondla amakati ukudla okomile. Siyazi ukuthi ukuzwela kwekati ukoma kunciphile uma kuqhathaniswa nenja. Awaphuzi ngokuzithandela amanzi njengenja. Futhi ngoba amakati ngokwemvelo akhiqiza umchamo ogxile kakhulu, ukudla kuphela ukudla okomile sibalungiselela izinkinga zomgudu womchamo lapho ukudla kwabo kunamanzi amaningi.
Lapho amakati enezinkinga zomgudu womchamo, isincomo ukuwabeka ekudleni okunothile emanzini. Kodwa-ke, kungani ungasebenzisi umuthi wokuvikela ngokuwondla ngokudla okusemathinini (umswakama ophakeme) ngaphambi kokuba kuphele izinkinga zomgudu womchamo?
Amakati enzelwe ukuthola amanzi awo ekudleni kwawo. Yize amagundane, ukudla okujwayelekile kwekati, aqukethe cishe ama-70% wamanzi nokudla okusemathinini cishe ngama-78%, ukudla okomile kuqukethe amanzi aphakathi kuka-5% no-10%. Kungakho ukudla okusemathinini kwenza umsebenzi ongcono wokugcina ikati lakho linamanzi amaningi.
Nikeza amanzi amancane
Ngokusobala, amanzi abalulekile, kokubili emakati nakubantu. Okubalulekile empilweni, amanzi amele ama-60% kuya kuma-70% esisindo somzimba wekati elidala. Ukuntuleka kwamanzi okukhulu kungaba nemiphumela ebucayi yezilwane ezifuywayo, kubangele ukugula okubi noma ukufa.
Yize ukudla okumanzi kungahamba ibanga elide ukuhlangabezana nezidingo zamanzi zomngani wakho, amakati kufanele abe neziningana futhi. imithombo yamanzi okusha kuyatholakala endlini. Naka lapho ikati lithanda ukuba khona ngakho kukhona amanzi lapho. Futhi, kufanele wazi ukuthi amanye amakati athanda amanzi agobhozayo; abanye bangathola ukunambitheka kwe-chlorine emanzini ompompi, ngakho-ke ungahle uthande ukubathengela amanzi asemabhodleleni.
Imifino noma imifino
Elinye iphutha elenziwe lapho ukondla amakati uzama ukwenza amakati abe imifino noma i-vegan. Amakati adla inyama, okusho ukuthi kumele adle ngokuyinhloko izitho zenyama nezilwane ukuze achume. I-amino acid taurine, isibonelo, itholakala kuphela kwizicubu zezilwane. Ukuntuleka kwe-taurine kungadala ukuthi ikati lihlangabezane nezinkinga zenhliziyo, ukungaboni, nokufa imbala.
Amakati ezinomsoco adinga ukuthi avela enyameni anganikezwa ngokwenziwe ekudleni. Kepha kufanele uqaphele kakhulu futhi uqaphele ama-idiosyncrasies wokudla okunempilo kwekati. Ngoba iningi lethu alinasiqiniseko ngezidingo zethu zokudla okunempilo, kungaba nzima ukuqagela ukuthi ziyini izidingo zamakati ethu.
Dala ukuntuleka kokudla okunempilo
Intshisekelo yokudla okwenziwe ngekati (nezinja) iyanda. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqaphela ukuthi okwenziwe ekhaya akusho ukuthi kunempilo ngaso sonke isikhathi. Iphutha elilodwa elenziwa ngabantu abanezinhloso ezinhle wukudla ukudla okwenziwe ekhaya okungalingani.
Lokhu kungenxa yokuthi lapho benza ukudla kwekati zisuka nje, abanye abantu bayehluleka ukulinganisa inyama nenani elifanele le-calcium, bakhohlwe ukuthi ikati lizobe lidla inyama nenyama yamathambo alo, linikeze isilinganiso esanele se-calcium ne-phosphorus.
Ukudla kwekati okusinda kakhulu ku-tuna, isibindi, noma uwoyela wesibindi (njengamafutha we-cod isibindi) kungaholela ku-vitamin A toxicosis, okuholele ebuhlungwini bamathambo namalunga, amathambo aqhekekile, nesikhumba esomile.. Ukudla okunothe kakhulu ngezinhlanzi ezingavuthiwe kungabhubhisa uvithamini B1, kubangele ukuba buthakathaka kwemisipha, ukuqubuka noma ukulimala kwengqondo. Uma umnakekeli we-feline efuna ukulungisa ukudla kwesilwane sakho, kufanele ulandele iresiphi elinganiselayo.
Enye indlela yokwenza lokhu ukuqala ngokuxoxa nodokotela wezilwane, ongakususa kude nezimfashini zokudla futhi akuqondise ohlelweni lokudla olulinganiselayo nolunempilo lekati lakho. Yize le ndatshana igxile ekondleni amakati, lawa maphutha okudla angenziwa nasemakati amakati. Ngalo mqondo, gwema ukwenza amaphutha lapho amakati akho mancane, kepha futhi uma ekhula!
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ukudla » Amakati adlani uma emancane?
Nginekati elincane futhi liyayidla inhlanzi kodwa liyidla liye emathanjeni futhi lithathe isikhathi ukulihlafuna bese liyaligwinya, igama lalo nguKeanu, limnyama ngemigqa empunga futhi limhlophe ngaphansi kodwa ukulibiza ngithi misubiche
Akukuhle ukudla amathambo, hhayi uma ephekiwe. Ucabanga ukuthi noma ngabe kunzima ukuhlafuna, ubungozi babo bokuthi bangene futhi babangele izinkinga bukhulu.
Uxolo endlini yami nginamakati ama-2 kepha ayaduka futhi ngifuna ukuwagcina, mancane, angazi ukuthi anamalini futhi awafuni ukuwadla, ngawathenga ubisi angithengisa kulo udokotela wezilwane kodwa abavunyelwe ukubanika. Abafuni ukudla noma yini futhi angisazi ngenzenjani kubo
Lapho zincane kufanele uzilawule kakhulu. Ubisi kufanele lube nemfudumalo, cishe ku-37ºC, futhi kufanele futhi zivikeleke kahle ngoba ngeke zilawule ukushisa komzimba kuze kube yilapho zinezinyanga ezimbalwa ubudala.
Uma bengathuthuki, kufanele babone udokotela wezilwane.
Sawubona… Ikati lami linamasonto ayisikhombisa lizelwe… .. Yini engcono kakhulu kulawa macala futhi yini engingayondla?
Ngaleso sikhathi ungaqala ukudla ukudla okomile okumanziwe emanzini, noma kuzoba lula kuwe ukuhlafuna ukudla okumanzi kwekati.
Okufanele ukwenze uma ikati lami liklinya
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuvala inzalo yamakati? Futhi ukuthena?